Sicela Uhlanganyele Amakhasi Wakho Okufika | Martech Zone
NgoMgqibelo, Okthoba 15, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 Douglas Karr
Sihlala njalo sibheke imicimbi efanele izithameli zethu. Amademo ewebhu, okulandwayo, ama-webinar, ama-podcast, ukubhaliswa kwengqungquthela… sithanda ukuthola izwi kunoma yikuphi okubonakala kukuhle. Engiqhubeka nokuthola kaninginingi, noma kunjalo, izingqinamba ezimbili ezibalulekile ezenza kube nzima (noma kungenzeki) ukwabelana nge ikhasi lokufika:
Azikho izinkinobho zokwabelana - inkinga yokuqala engiyaqhubeka ngiyithola ayikho izinkinobho zokwabelana komphakathi emakhasini okufika. Ikhasi lokufika liyindawo enhle yokwabelana nomphakathi! Uma ngibhalisela ukulanda noma umcimbi, kungenzeka ukuthi mhlawumbe kuyinto engifuna ukuyaba nenethiwekhi yami.
Akukho ukumakwa komphakathi - lapho wabelana ngesixhumanisi ku-Facebook noma ku-Google +, uhlelo lukhipha isihloko, incazelo kanye nomfanekiso omele ikhasi lakho. Uma ikhasi lakho limakwe kahle, imininingwane eyabiwe ibukeka iyinhle. Uma ingekho, idonsa imininingwane kusuka ekhasini okungalungile kahle.
Ngizoqhubeka I-Eventbrite, uhlelo engilusebenzise kakhulu esikhathini esedlule. Nakhu ukuthi i-Eventbrite iveza kanjani umcimbi olandelayo wefayela le- Ingqungquthela kababa 2.0 (ngoMashi). Nakhu ukuthi ukubuka kuqala kuzobukeka ku-Facebook:
I-Eventbrite ihlanganisa izinkinobho zokwabelana kahle futhi isebenzisa i- I-Open Graph Protocol ukufaka yonke imininingwane edingekayo. Ngeshwa, noma kunjalo, i-Eventbrite ayikuvumeli ukuthi usethe isithombe ongasithanda kumcimbi wakho. Esikhundleni salokho, bafaka isithombe ngophawu lwabo. Yebo!
Nayi i- ukubuka kuqala amazwibela ku-Google +:
Ngeshwa kubakhi bewebhu kuyo yonke indawo, iGoogle ayinqumanga ukudlala ne-Open Graph Protocol futhi esikhundleni salokho, idinga imininingwane ye-meta yabo ekhasini njengoba kuchaziwe Inkinobho ye-Google + ikhasi (bona phansi kwekhasi ekwenzeni ngokwezifiso amazwibela). Ngenxa yalokho, amazwibela e-Eventbrite abukeka esabekayo… edonsa isithombe sokuqala ekhasini kanye nombhalo othile ongahleliwe.
Kuthiwa, LinkedIn ngisebenzisa i-Open Graph Protocol futhi, kepha angikaze ngiyibone isebenza. Ngibona ukudonsa isithombe esihle kwesinye isikhathi, nezinye izithombe ezivela kusayithi eligcinwe kunqolobane ingunaphakade. I-LinkedIn ikuvumela ukuthi uhlele isihloko nencazelo. Ngasizathu simbe kubukeka sengathi kumane nje kudonse isihloko sesayithi kungakhathalekile isihloko sekhasi esisethwe kuthegi yegrafu evulekile.
Inothi elilodwa uma usebenzisa i-WordPress ukuklama amakhasi okufika. Ngafinyelela kuJoost de Valk, owathuthukisa into emangalisayo I-plugin ye-WordPress SEO okubandakanya umthetho olandelwayo wegrafu ovulekile futhi wamthumelela imininingwane edingekayo yokwengeza amathegi we-meta we-Google +. Kufanele zisetshenziswe ngokushesha!
Imithombo Yezokuxhumana Yomqondo Ocabangelayo